June 5, 2021 585
अचेल कागज एउटा सामान्य बस्तु हो । हामी यसलाई दिनहुँ प्रयोग गर्छौं। यो निकै महत्वपूर्ण वस्तु हो। यो विज्ञानको मूल्य`वान् उपहार हो। प्राचिनकालमा मानिसहरूलाई कागजको बारेमा थाहा नभएकोले उनीहरुले रुखका पातहरु र बोक्राहरुमा लेखेका थिए ।
चिनियाँ`हरुले कागज सर्वप्रथम बनाए। उनीहरुले यसको बारेमा धेरै वर्षअघि बुझे। अचेल करिब हरेक देशले यसलाई उत्पादन गर्छन् । कागज झुत्रो कपडाहरु, पराल, घाँस, बाँस र कपडा`हरू बाट बन्छ । यी चिजहरुलाई सर्वप्रथम स-साना टुक्राहरुमा काटिन्छन् । त्यसपछि तिनीहरु सोडा र चीनमा उमालिन्छन् । यसले गर्दा निकै नरम तरल पदार्थ निस्किन्छ । यही गुदीलाई फैलाइन्छ र कागज`को ताउहरु बनाइन्छ।
डण्डा`हरूको मुनि गुदीलाई थिचेर यस्तो गरिन्छ। चेप्तिएको ताउहरुलाई त्यसपछि थीचिन्छ र आकार हरुमा काटि`न्छ। कागज कार`खानाहरुमा बनाइन्छ। यसलाई हातद्वारा मानिस`हरूको घरमा पनि बनाइन्छ। हातद्वारा बनाइएको कागजलाई हस्तनिर्मित कागज भनिन्छ। हाम्रो देश हस्तनिर्मित कागजको लागि प्रसिद्ध छ तर निकै थोरै मात्रामा हस्तनिर्मित कागजहरु छन्। हाम्रो देशमा हामी सित थोरैमात्र कागज कारखाना हरु छन् ।
तिनीहरू श्री भृकुटी कागज कारखाना,बाबा कागज कारखाना र एभरेस्ट कारखाना छन्। तिनीहरूले हामीलाई चाहिएजति सबै कागज उत्पादन गर्न सक्दैनन् तसर्थ हामी अन्य देशहरुबाट कागज आयात गर्छौं। कागज हाम्रो लागि निकै उपयोगी छ कागजमा हामी लेख्छौं हाम्रो हिसाब गर्छौं।
हामी हाम्रा किताबहरु समाचारपत्रहरु र पत्रिकाहरू छाप्छौं । यसलाई सामानहरु पोको पार्न र सजावटका लागि पनि प्रयोग गरिन्छ । भिडियोमा हेरौँ कागज कसरी बन्छ …
Prevआज डलरसहित अन्य देशको मुद्राको भाउ कस्तो छ ?
आज कुन जिल्लामा कति जना संक्रमित भेटिए ? हेर्नु`होस्
फिल्मी शैलीमा अप’हरण गरी एक नेपाली युवाको यसरी गरियो ह’त्या…..
यी युवतीको भिडियो बन्यो भाइरल, कमेन्टमा युवाले भने १६/१७ वर्षमा यस्तै हुन्छ नानी (भिडियो सहित) (132830)